05 / 01 / 2021 06 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 4243 Views စာ2မှတ်ချက် 10182 Caféထောင့်, 10185 အစိမ်းရောင်ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တ, 10190 Market ကလမ်း, 10197 မီးသတ်တပ်မဟာ, ၁၀၂၁၁ Grand Emporium, 10218 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်, ၁၀၂၂၄ မြို့တော်ခန်းမ, 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ, 10243 Parisian စားသောက်ဆိုင်, 10246 စုံထောက်ရဲ့ရုံး, 10251 အုတ်ဘဏ်, 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, ၁၀၂၆၀ Downtown Diner, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10270 စာအုပ်ဆိုင်, 10278 ရဲစခန်း, Lego, modular အဆောက်အ ဦး များ, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, အဆင့်
အဆိုပါ Lego Modular Buildings Collection တွင်အသစ်ထပ်ဖြည့်စွက်ထားသည် 10278 ရဲစခန်း - သို့သော်၎င်းသည်ကျန်အပိုင်းနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
10278 ရဲစခန်း ယခုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com နှင့် Lego သိုလှောင်ခန်းများ (သူတို့ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နေရာ)၊ စုစုပေါင်းမော်ဂျူလာအဆောက်အအုံအရေအတွက်ကို ၁၆ အထိတိုးမြှင့်ပေးသည် ဒီမှာ, နှင့်သူက 18+ အကွာအဝေးမှဆောင်ခဲ့သောအရာကိုတကယ်ချစ်ကြောင်းကိုလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် modular အဆောက်အအုံသစ်ကိုလက်ထဲအပ်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်အထိ ၀ င်ရောက်မှုတိုင်း၏ခိုင်မာပြတ်သားသော - အလွန်မြင့်မားသောပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသည့်အခွင့်အရေးကိုလက်ဆင့်ကမ်း။ မရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုဖတ်ပါ၊ မှတ်ချက်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၌ (သို့) ပျက်ပြယ်ထဲ၌ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သဘောမတူပါဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။
16. 10190 Market ကလမ်း
၁၀၁၉၀ Market Street စစ်မှန်သည်ဟုတ်၊ မဟုတ်သည်အထိသင်၏အသံအသံနိမ့်သည်အထိသင်ငြင်းနိုင်သည်art Modular Buildings Collection ၏မူရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သေရန်ခက်ခဲသောတောင်ကုန်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့, ကအောက်မှာစတင်ခဲ့ကြပေမည် Lego နောက်ကျော 2007 ခုနှစ်စက်ရုံဆောင်ပုဒ်, ဒါပေမယ့် Lego Group မှပြောကြားသည်မှာ - 10278 ရဲစခန်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်ယခင်အဆောက်အ ဦး (၁၅) ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်လျှော့ချင်တာကတခြားအဆောက်အ ဦး တွေနဲ့မကိုက်ညီလို့ပါ။ စကားပြောရန်အတွင်းပိုင်းမရှိပါ၊ အပြင်ဘက်မှာရေနံစိမ်း၊ ဘလူးနှင့်အနီရောင်တိုက်ပွဲများသည်ကြည့်ရတာမပျော်ပါ။ ဒါပေမယ့်အေးမြ p ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိပါတယ်art လမ်းကြားပေါ်ရှိနှင်တံများနှင့်ချိုများအပါအ ၀ င်ထောက်ပြရန်အသုံးအနှုန်းများနှင့်လှေကားထစ်များအတွက်နည်းစနစ်သည်အထူးကောင်းမွန်သည်။ ကျန်ကစားသမားများသည်ထိုကတိတော်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။
15. 10182 Caféထောင့်
ပထမ ဦး ဆုံး modular အဆောက်အအုံတစ်ခုမှအုတ်မြစ်ချခဲ့ကြပေမည် Lego Group ၏အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်စံသတ်မှတ်ချက်များအရအနည်းငယ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအချည်းနှီးဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးမှိုင်းသောအရောင်ကိုသုံးသည်။ ကြမ်းပြင်တစ်ခုစီကိုလုံးလုံးတစ်ခုတည်းသာကိုင်ထားသည်။
ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာအသစ်အဆန်းကိုပြိုကွဲစေတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအတွက်တကယ့်ကိုအသေးအဖွဲပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများသာဖြစ်ပြီး၊art ၎င်း၏အချိန် palette ။ (အဓိကဝင်ပေါက်ကျော် arching နှင်းလျှောစီး element တွေကို ap ဖြစ်ကြသည်articular highlight ။ ) 10182 Café Corner သည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုကောင်းမွန်သောအဆောက်အအုံများဖြင့်သာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
14. 10218 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်
16 × 32 အဆောက်အ ဦး များ၊ 10218 Pet Shop တစ်စုံပါ ၀ င်သည့်ပထမဆုံး modular အဆောက်အအုံသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုအတွက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ချီးကျူးသင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြို့နေအိမ်တစ်အိမ်နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ကောင်းတစ်ခုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ သဲအပြာသည်အရောင်များစွာကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးမြို့အိမ်၏ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်ပြောင်းပြန်ဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ယနေ့ထုတ်ဝေလိုက်သောအစုတစ်ခုကဲ့သို့ပင်အထင်ကြီးစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, 10218 ကိုလည်းထပ်မံနံရံများ - အဆောက်အ ဦး များပေါ်တွင်နှစ်ဆနှင့်အတူပြtheနာကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆောက်အအုံများကိုသီးခြားရပ်တည်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောအုတ်များသည်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အလွန်သေးငယ်သောအရာဖြစ်သည်art၁၀၂၁၁ Grand Emporium နှင့် ၁၀၁၈၅ အစိမ်းရောင် Grocer တို့၏ကြီးမားသောဘေးတွင်အထူးသဖြင့်အတွင်းပိုင်းများမရှိဘဲနောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
13. 10211 က Grand Emporium
၁၀၂၁၁ Grand Emporium ၏အတွင်းပိုင်းသည်“ ခမ်းနားထည်ဝါသော” တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်းသူ၏အပြင်ပန်းမှာမူအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါက classic ထွက်ခွာartLondon မှ Regent Street တန်းစီနေသောအဆောက်အ ဦး အမျိုးအစားကိုသတိပြုရန်ထိပ်တိုက်မှအောက်သို့သိုလှောင်ပါ။
သေချာတာပေါ့city အဆိုပါမျက်နှာစာ၏ st ဖြစ်ပါတယ်artset ကိုရဲ့အသက်ကိုအပ်နှံဖို့ ing ။ (၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီဖြစ်သည်။ ) ပြင်ပကော်လံများကို၎င်း၏မြေညီထပ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပင်ပင်ပန်းပန်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။art အစဉ်အဆက်မဆို modular အဆောက်အ ဦး ၏။ သို့သော်၎င်း၏စက်လှေကားများနှင့်သံမဏိများမှ၎င်း၏ 'ဆိုင်' ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ခေါင်မိုးပေါ်မှကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အထိ၊ ၁၀၂၁၁ Grand Emporium သည် Modular အဆောက်အအုံများစုဆောင်းခြင်းတွင်အလွန်ထိုက်တန်သောဝင်ငွေအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
12. ၁၀၂၂၄ မြို့တော်ခန်းမ
အကယ်၍ သင်သည် `ပိုကြီးသည် better ဆိုသည့်ဂါထာကိုစာရင်းသွင်းလျှင်သင် ၁၀၂၂၄ မြို့တော်ခန်းမသည်သင်၏အဆင့်မြင့်အဆောက်အအုံများ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မူ၎င်းသည်အရွယ်အစားကြီးကြီးမားမားကိုလိုက်ဖမ်းနေစဉ်အနည်းငယ်သေးလွန်းသောအချက်ကိုသာစွန့်လွှတ်ပြီးအပြင်ပန်း၏အပြင်ပန်းကို ဦး တည်စေသည်။
၎င်းသည်မည်သည့်နေရာ၏မည်သည့်ဗဟိုချက်မဖြစ်သင့်သည်ဆိုသည့်အတွက်သင့်လျော်သည် Lego city အပြင်အဆင်။ ထို့အပြင်မြို့တော်ခန်းမ၏ရည်မှန်းချက်မှာ၎င်း၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားသာမကမျက်လုံးမှောင်နေသောလိမ္မော်ရောင်အရောင်များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည့်ဓာတ်လှေကားများပါပါ ၀ င်သည်။ ဒီအစုကိုချစ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ဆက်ခံသူများနှင့် (သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်မက) ကိုမယှဉ်နိုင်ပါ။
11. 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ
သင်တစ် ဦး တည်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ရုံသို့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဘယ်အချိန်သွားခဲ့သနည်း အိုကေ, 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ၏အတွင်းပိုင်းသည်ငါတို့မြင်ဖူးသမျှရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံ၏တိကျမှန်ကန်သောထုတ်ဝေမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် modular အဆောက်အအုံများ၏အတိုင်းအတာနှင့်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်၎င်းသည်ရရှိသွားသည့်အတိုင်းအခြေခံအားဖြင့်ကောင်းမွန်သည်။
ပြင်ပ architecture ဟောလီးဝုဒ်ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ Grauman ၏တရုတ်ပြဇာတ်ရုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုဆိုလက်ခံသည်။ စတိတ်ကာမြေပြင်ကြမ်းပြင်ကိုအလှဆင်ထားသောပိုစတာများမှာမူအကြွင်းမဲ့ဖြစ်သည်။ (အစုံပါ ၀ င်သောအုတ်ခွဲစက်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ) ထို့အပြင်အနီရောင် ၃၂ × ၃၂ အောက်ခြေပြားသည်အခြားအလှကုန်တစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်၏ ၂၃၁ ဆေးရုံတွင်သာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရှားပါးအကြောင်းပြောဆိုပါ။
10. 10270 စာအုပ်ဆိုင်
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ modular အဆောက်အအုံသည် 2020 Pet Shop ၏ချဉ်းကပ်ပုံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပိုကောင်းသည်ထက်ဆိုးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ၁၆x ၃၂ အဆောက်အအုံများသည်သင်၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော modular လမ်းတွင် ပိုမို၍ ဘက်စုံသုံးနိုင်သည်ကိုငြင်းဆိုနိုင်သည်။art အသုံးပြုမှုနှင့်အလေးအနက်ထားအေးမြအရောင်အစီအစဉ်များ။
ဒီတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲ 10270 စာအုပ်ဆိုင် နောက်ကျောလား ကောင်းပြီ၊ အတွင်းပိုင်းများသည်နေရာများတွင်ထူးဆန်းနေခြင်းမဟုတ်ဟုခံစားရသည်၊ အနည်းဆုံး Birch Books သည်ကြုံတွေ့နေရသောစတော့ရှယ်ယာရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မြို့တွင်းလူနေမှုအချိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် - မြေညီထပ်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်တန့်နေသောပထမထပ်သည်ကျန်လမ်းများနှင့်အတူထိုင်။ မထိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်လှပသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို modular ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
9. 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က '50s- ပုံစံပြောင်းရန်ဆက်လက်အတွက် art Deco architecture in ၁၀၂၆၀ Downtown Diner၏ဒီဇိုင်နာများ 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် ၎င်း၏ယခင်၏ရဲရင့်အရောင်များထက်ပိုမိုအသံတိတ်အရောင်အစီအစဉ်အတွက်ရွေးချယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ မှောင်မိုက်သောလိမ္မော်ရောင်အဆောက်အအုံသည်ကျယ်ပြန့်သောလမ်း၏ဒီဇိုင်းနိယာမများကိုစွဲမြဲ။ စွဲမြဲစေသည် architectureစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရည်ညွှန်းချက်များ (Vet ၏ဆေးခန်းရှိအင်ဒီယာနာဂျုံးစ်အားခေါင်းညိတ်ခြင်းအပါအဝင်) နှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ယင်း၏ဘာသာရပ်သည်စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကဲ့သို့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမည်မဟုတ်ပါ၊ particularly ၏ litany ပေးထားသည် Lego CITY ကားဂိုဒေါင်တွေ garage လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါတို့အုတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာတစ်ခုပဲ။
8. 10197 မီးသတ်တပ်မဟာ
အဆိုပါ ပဉ္စမ - အများဆုံးစျေးကြီး modular အဆောက်အ ဦး (aftermarket စျေးနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး) ပုံမှန်၏အခြေခံသဘောတရားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီးရီးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် Lego CITY အခင်းအကျင်း - မီးသတ်ဌာနများ။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာ၊ ၁၀၁၉10197 မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၏ခေတ်မီဆန်းပြားသော ၁၉၃၀ ခုနှစ်များ architecture မကြာခဏအငယ်တန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားရပ်တည်သေချာ CITY လှပသောအပြင်ပန်း၊ အသေးစိတ်အတွင်းပိုင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်မိုးများပါ ၀ င်သောအဆောက်အအုံများ - မော်ဂျူလာအဆောက်အအုံအားလုံးသည်ဝါကြွားနိုင်သည့်အရာ - ၎င်း၏ခေါင်းလောင်းကြောင့်
ဒါဟာထိတွေ့ sp ခံစားရပါဘူးartတစ်ခုနှစ်ခုထပ်ပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်မီးသတ်ဌာနမှသင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည့်အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ firetruck နေရာ၊ မီးတိုင်၊ မီးသတ်ကိရိယာများ၊ ping pong စားပွဲ၊ အိပ်ရာနှင့်စာအုပ်စင်။ (ဟေး၊ မီးသတ်သမားများအားလည်းအချိန်အနည်းငယ်ခွင့်ပြုထားသည်။ )
7. ၁၀၂၆၀ Downtown Diner
၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ modular အဆောက်အအုံသည် Modular Buildings Collection အတွက်တကယ့်အဆိုင်းဖြစ်သည်။ တချို့က '၅၀ စတိုင်အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့စိမ်းပြာရောင်အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့အရောင်ကိုပြသလိုက်သည် architecture နှင့်တက်ကြွပန်းရောင်ကားတစ်စီး။ အခြားသူများကမူ၎င်း၏ပြောင်းရွှေ့ဝေး disavowed classic အပြုံးမျက်နှာမျက်နှာ minifigures, ၎င်း၏ clashing အရောင်များနှင့်အုတ်တစ်ခုeအပေါ်ဖြုန်းပုံရသည်xtra မော်တော်ယာဉ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေအတွက်၊ ၁၀၂၆၀ Downtown Dinerရဲရင့်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုကျေနပ်လောက်တဲ့လက်ခုပ်သြဘာပေးသင့်တယ်။ The architecture ၎င်း၏အပေါ်ထပ်ကြမ်းပြင်များသည်အနည်းငယ်မျှသာရှိကောင်းရှိသော်လည်း၊ ၎င်း၏မြေညီထပ်နှင့် jukebox ပုံစံမျက်နှာစာ၏ဒီဇိုင်းကိုဤစီးရီးတွင်မလိုအပ်ဘဲထည့်သွင်းရန်လုံလောက်သည်။ (ဘယ်သူတွေနောက်ပြောင်နေတာလဲ - သူတို့အားလုံးဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ )
6. 10185 အစိမ်းရောင်ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တ
အသက်သည်အရေးမကြီးကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားသက်သေပြရန်၊ ၁၀၁၈၂ Café Corner နှင့် 10182 Market Street ၏နောက်ကွယ်တွင်တတိယအကြိမ်မြောက် modular အဆောက်အအုံသည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာခေတ်မီမော်ဒယ်လ်အဆောက်အအုံများရဲ့အသေးစိတ်ကျတဲ့ပရိဘောဂတွေနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် 10190 Green Grocer ရဲ့အပြင်ပန်းကလိုက်နာရမယ့်အရာအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီနေဆဲပါ - 10278 ရဲစခန်း.
အဲဒီမှာရှိတယ် အချို့သော အတွင်းပိုင်း၊ လုံးဝအနည်းဆုံး (နှင့်ကောင်းစွာသိုလှောင်ထားသောရေခဲသေတ္တာအချို့ရှိသည်) သည်မြေညီထပ်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလေးအနက်ထားစရာကောင်းသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးစုဆောင်းခြင်းတွင်လိုအပ်သောအမြင်အာရုံအမျိုးမျိုးထည့်သွင်းခြင်း - စartမျက်မှောက်ခေတ်အဆောက်အအုံများသည်အရွယ်အစားကျဉ်းမြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏ပထမထပ်ကုလားကာမှသည်၎င်း၏ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအရိုးစုများ၊ တူအံတိုင်များအထိသိသိသာသာနည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏လှပသောသဲစိမ်းအစိမ်းအရောင်ကိုလျစ်လျူရှု။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝနာကျင်စေပါသည် BrickLink မှတဆင့်စုဝေး.
5. 10251 အုတ်ဘဏ်
ထောင့်နှစ်ခုနှင့် ၁ -၁ မော်ဂျူလာအဆောက်အ ဦး များ၏အခြေခံမူများကိုပေါင်းစပ်ပြီးလုံးဝထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်2Brick Bank သည်ခေတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏တစ်ခေတ်တည်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျှတစွာထိုင်ရသောအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ သို့သော်အရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်ဖြင့်ကြီးမားသောသဘာဝကိုထင်ဟပ်စေသည် classic ဘဏ်တည်ထောင်ခြင်း။
အတွင်းခန်းထဲမှာသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာအားလုံး၊ ဘဏ်ပြောသူများထံမှလုပ်ငန်းခွင်သိုလှောင်ခန်းအထိပါရှိပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံး modular များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းရှုထောင့်ကိုအမှန်တကယ်မှီခိုအားထားနေရသည်။ အလွန်သေးငယ်သောအဝတ်လျှော်ခလုတ်သည်ပိုက်ဆံပေါ်သို့ ၀ င်ငွေရစေသည်။ Pun အဝတ်လျှော်, နှင့်ကုမ္ပဏီကြီးယှဉ်ပြိုင်မှု - ဆုရှင်စစ်ဆေးမှုများတောက်ပဖြစ်ပါတယ်။
4. 10243 Parisian စားသောက်ဆိုင်
10243 Parisian စားသောက်ဆိုင်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြန့်ချိလိုက်သောအကြီးမားဆုံးမော်ဂျူလာအဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ သတ်မှတ်ထားအချိုးအစားကပ်နှင့် - အများဆုံး p များအတွက်art - လှပသောအဆောက်အအုံသည်ယခင်က၏လှပမှုကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စီးရီးအတွက်အခြေခံအားဖြင့်အသစ်တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဖြစ်လာမည့်အရာအားလုံးသည်သူ၏ခြေရာကိုလိုက်ပြီးအတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုလုံးအပြင်ဘက်အရွယ်အစားကိုအသေးစိတ်မျက်နှာသာပေးသည်။ မရနိုင်ပါဘူးမှ architecture မီးဖိုချောင်နှင့်ခေါင်မိုးအပြည့်ရှိသောအပြင်ဘက်ထိုင်ခုံများပါရှိသည် art စတူဒီယိုစတူဒီယိုမှာပျော်မွေ့စရာတွေအများကြီးရှိလို့ပါရီယန်စားသောက်ဆိုင်ကိုဒီလိုလေးစားမှုမရှိတာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေအတွက်မူ၎င်းကိုလွှတ်ပေးပြီးကတည်းကအခြားအဆောက်အအုံသုံးခုဖြင့်ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။
3. 10246 စုံထောက်ရုံး
ခြောက်နှစ်မတိုင်မီက Lego အုပ်စုသည် Modular Building Collection ၏ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတရားဝင်ဖြစ်စေခဲ့သည် 10278 ရဲစခန်း10246 စုံထောက်ရုံးနှင့်အတူ၎င်း၏အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော ဦး ထုပ်ကိုရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်သားများသို့တင်ခဲ့သည်။ Ace Brickman ၏အလုပ်ခွင်သည်နည်းပညာတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်art ရေကူးကန်ခန်းမ၊ ဆံပင်ညှပ်နှင့်အက်ပ်တို့ပါ ၀ င်သည့်အလွန်အထင်ကြီးလောက်သောမော်ဒယ်၏artment ။
ပန်းရံအုတ်များသည်အပြင်ပန်းနံရံများအတွက်အကြီးအကျယ်သုတ်သင်မှုများစွာပြုလုပ်သော်လည်းမော်ဒယ်တစ်ခုလုံး၏အရောင်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး 'ရေကူးကန်' စာလုံးကိုတီထွင်ကြံဆကြသည်။ သို့သော် ၁၀၂၄၆ စုံထောက်၏ရုံးခန်းသည်အမှန်တကယ်ထွန်းလင်းတောက်ပသည့်အတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ရေကန်စားပွဲ၊ ဆံပင်မှန်များ၊ ရုံးခန်းအသေးစိတ်နှင့် cookie- မှောင်ခိုတင်သွင်းသောဇာတ်ကြောင်းတို့တွင်အားလုံးအတူတကွပေါင်းစပ်စေသည်။
2. 10278 ရဲစခန်း
သင်ဟာ recency ဘက်လိုက်မှုကြောင့်သားကောင်ဖြစ်သွားပြီလို့သင်ပြောကောင်းပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဂျူးလ်အဆောက်အအုံကသူတို့အားလုံးထဲမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်။ ဒီစာရင်းမှာပါတဲ့ set တွေလိုပဲ 10278 ရဲစခန်း နှင့်အတူထုပ်ပိုးသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းစနစ်များမယုံနိုင်စရာပဲ ပြသမှုအပေါ်နှင့်ရန်အကြွင်းမဲ့အာဏာဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်ပါတယ် အတူတူထား.
ဒါဟာတကယ်တော့ဒီအဆင့်မှာဒုတိယနေရာကိုရောက်သွားစေတဲ့ထိတွေ့မှုလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ထောင့်ကနေကြည့်ကောင်းနေစေတဲ့စွဲမှတ်ဖွယ်အရောင်ပိတ်ဆို့မှုကနေပလတ်စတစ်သွေးပြန်ကြောတွေကနေဖြတ်သန်းသွားတဲ့လျှို့ဝှက်အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များအထိ (ဒါကြောင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ချခြင်းအတွက်) ၎င်း၏မှုတ်သွင်းဇာတ်ကြောင်း) ။ အကောင်းဆုံးကတော့ 10278 ရဲစခန်း သက်သေအထောက်အထား - အစဉ်အဆက်ကလိုအပ်ခဲ့ကြပါလျှင် - သော Lego အုပ်စုသည်ကုန်ဆုံးရန်နီးကပ်လွန်းသည် ideas, နှင့် Modular Buildings စုဆောင်းခြင်းအတွက်သေးအများကြီးကျန်ကြွင်းသော။
1. 10255 ညီလာခံရင်ပြင်
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရသင်သည်သင်၏ဘဝကို 'more' သည် 'ပိုမိုကောင်းမွန်သော' အလိုအလျှောက်ညီမျှသောဂါထာဖြင့်မနေထိုင်သင့်ပါ။ သို့သော် Modular Buildings စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်အမှန်ပင်ထိုသို့ငြင်းဆိုရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ယင်းသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ - မယုံနိုင်လောက်အောင်ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု 10255 ညီလာခံရင်ပြင်အဆိုပါ subtheme ၏ 10 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပရန်ဖြန့်ချိ, တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြီးပြီမော်ဒယ်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်လုံးဝသိသာသည်။
အမှန်မှာ၊ ခြေရာခံ ၃၂ × ၄၈ လုံးပိုမိုကျယ်ဝန်းသည့်နေရာ - ဤစာရင်းရှိအခြားအရာများထက် ၁၆ လုံးထက်ပိုသောအချက်များ - သည်အလိုအလျောက်တွန်းအားမပေးပါ 10255 ညီလာခံရင်ပြင် တိုင်ရန်, အဲဒီအစားဒါကဘယ်လိုeလဲxtra နေရာအကျယ်အ ၀ န်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၄၀၀၂ အပိုင်းကို ဖြတ်၍ လုံးတလုံးမျှမဖြုန်းတီးပါ။ ၎င်းသည်ယနေ့အထိတန်ဖိုးအရှိဆုံး modular အဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှအလှအကောင်းဆုံးသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည် architecture ၎င်းသည် subtheme တစ်ခုလုံးကိုကောင်းမွန်စွာနေရာ ချ၍ သိမ်မွေ့သောရည်ညွှန်းချက်များတွင်ပြည့်ကျပ်နေသည်။
အတော်ကြာလိုပဲ Lego Group ၏အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအစုံ 10255 ညီလာခံရင်ပြင် လက်ရှိမှာစာရင်းကိစ္စများခံစားနေရပြီးဖြစ်ပါတယ် LEGO.com, ဒါပေမယ့်သင်ကစတော့ရှယ်ယာထဲမှာမြင်ရလျှင်, သိပ်နောက်ကျမတိုင်မီသင် snag သေချာပါစေ။ (စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် ကိုယ်ပိုင်စတော့ရှယ်ယာသတိပေးချက်များ.)
အကယ်၍ သင်ဟာသင်၏စုဆောင်းမှုတွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါက၎င်းသည်တိုက်ရိုက် beeline ကိုပြုလုပ်သင့်သည် 10278 ရဲစခန်း, သင်ယခုမှာယူနိုင်သည်။ Modular Buildings Collection တွင်နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်ထားသောအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပါ အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်, ၎င်း၏အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ငါးခု, ဘယ်လိုပြရမလဲ သင့်ရဲ့ကျယ်ပြန့် layout ကို၌၎င်း, ဘယ်မှာရှိရာ ယခုအချိန်အထိစီးရီးအတွက်အကြီးဆုံး entries တွေကိုအကြား။
← LEGO လား Creator Expert 10295 ခုနှစ်တွင်လာမယ့် 911 Porsche 2021?
LEGO အစုံတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းရုပ်ရှင် ၅ ခု →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLEGO Modular အဆောက်အအုံများစုဆောင်းခြင်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း"
အစဉ်လိုက်ပြောင်းလဲမှုအချို့ (modular နှစ်ခုအတွက်ပိုမြင့်/အောက်တစ်နေရာ (သို့) နှစ်နေရာပဲ)၊ မင်းရဲ့စာရင်းကိုငါအပြည့်အ ၀ သဘောတူတယ်။ ရှင်းလင်းချက်များမှာလည်းရှင်းပါသည်။
ချစ်စရာကောင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် article ။